I-LMMS, ithuluzi lokwenza umculo, ithola isibuyekezo esisha ngemuva kweminyaka emi-4 | Kusuka kuLinux
Ithuluzi lokudala umculo lomthombo ovulekile i-LMMS lithole isibuyekezo esisha esizinzile ngemuva kweminyaka engu-4.
Uhlobo lwangaphambilini lwaleli thuluzi labaculi yi-LMMS 1.1.3 futhi lakhishwa ngo-2015. Manje kuza i-LMMS 1.2 enokuthuthuka okuningi, izici ezintsha nokulungiswa.
Lapho isibizwa nge-clone yamahhala ye-Fruityloops (FL Studio), i-LMMS ikhule yaba ithuluzi elihle labaculi abanobunikazi babo. Uhlelo lokusebenza lune- isikhombimsebenzisi esibonakalayo, amathuluzi ahlukahlukene kanye nengcebo yezici kufaka phakathi ukusekelwa kwezinsimbi ze-VST.
Yini okusha in LMMS 1.2
Nge-LMMS 1.2 iqembu lakha isisekelo esiqinile ngeminyaka emine yokulungiswa, ukuthuthuka kwezici eziyinhloko nezici ezintsha kusixhumi esibonakalayo.
Ku-LMMS 1.2 sithola iculo elisha, iculo elisha ledemo, i-parametric equalizer enombukeli we-spectrum, ukuvumelanisa kwe-VST kunikwe amandla ngokuzenzakalela, kuthuthukiswa ukungeniswa nokuthunyelwa kwe-MIDI, uhlu lwemiphumela ehlelekile, phakathi kwezinye izinto eziningi.
Okwabasebenzisi beLinux ngqo ukusekelwa kwesithombe sohlelo lokusebenza kufakiwe, nokulungiswa kwe-32-bit VST ku-64-bit Linux ngokuvumelanisa kwe-VST kunikwe amandla. I-interface manje isebenza kahle ngokubonisa kwe-HiDPI.
I-LMMS imahhala futhi iyatholakala IWindows, MacOS neLinux, ungalanda isifaki kufayela le- ikhasi elisemthethweni. Abasebenzisi be-Linux bangakuthola lokhu kukhishwa kwakamuva njengesithombe sohlelo lokusebenza, esivumela ukuba nesitsha esinakho konke ukuncika okudingekayo ngaphakathi.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » I-LMMS, ithuluzi lokwenza umculo, ithola isibuyekezo esisha ngemuva kweminyaka engu-4
Amabhange Esithombe: Izindawo ezingcono kakhulu zamahhala nezamahhala zango-2019